Mayelana NATHI - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
I-OSB (I-Oriand Strand Board)
I-LVL / LVB
IBhodi le-HPL elingangenwa umlilo
Ngenisa Futhi Thumela Insizakalo
I-XUZHOU ROC INTERNATIONAL TRADING CO., LTD
Ikhaya Lomhlaba Iqembungumkhiqizi omkhulu futhi othumela kwamanye amazwe i-plywood nemikhiqizo ehlobene nayo e-China, eyasungulwa ngo-1993 ngezinkampani ezingaphansi kuka-6. Manje sijabulela imigqa engama-73 yokukhiqizwa kweplywood ebhekene neplywood neplywood elihle.
Ukukhiqiza kwethu kuzo zonke izinhlobo zeplywood kungu-220,000m3 no-1,000,000m3 wefilimu ebhekene neplywood unyaka ngamunye. Ifakwe imishini eminingi esezingeni eliphakeme, ama-sandwich ama-Italian IMEAS, imishini yokuxebula yaseJapan UROKO, ama-Veneer Joint Tenderizers nemishini emikhulu eyomile, inkampani izibophezele ekukhiqizeni nasekukhipheni imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu kwifilimu ebhekene nepulangwe neplywood elihle kanye ne-Antiskid Plywood.
Sizuze udumo lwe- "Chinese Famous Trademark", "Jiangsu Quality Trusted Products" kanye ne- "AAA Corporate Credit".
Le nkampani iphikelela esimisweni sokulawulwa kwekhwalithi enhle nokwethembeka ngaso sonke isikhathi.
Futhi imikhiqizo yethu iqinisekiswe yi-IS09001: 2000, IS014001: 2004, CE, FSC, BFU futhi ithengiswe kahle emazweni angaphezu kwekhulu emhlabeni wonke, njengeJalimane, i-Australia, i-USA, iChile, iLibya, i-UAE, iSaudi Arabia , Korea, Japan, njalonjalo.
Ngenhloso yokuphekela izidingo zemakethe yomhlaba, siye sabambisana nabathengisi abaningi bezinto zokwakha abadumile, sinesibopho sokuklama kanye ne-OEM yomkhiqizo wabo weplywood nefenisha.
Ngokusekelwe ekuphathweni kwekhwalithi ephezulu, ubuchwepheshe obuhle kanye nobuchwepheshe obuholayo, iqembu lasekhaya lasekhaya lihola phambili emakethe futhi liyaziqhenya ngokunikela ngale mikhiqizo nezinsizakalo kumakhasimende ethu.
Imikhiqizo yezwe lasekhaya
Ikheli: Isikhungo Senso, iPizhou City, Isifundazwe saseJiangsu, eChina